ANDROID VIDEO EDITOR - KINEMASTER - NGWA MKPANAKA - 2019
M kpebiri ịhụ otú ihe dị na ụdị ụdị dị ka editọ vidio na ngwanrọ gam akporo. Enwere m anya ebe a, na-ele anya na a na-akwụ ụgwọ na n'efu, gụọ otu ọkwa nke ihe omume ndị dị otú ahụ, ma, dị ka a rụpụtara, ahụghị ọrụ kachasị mma, ịdị mfe nke iji ya na ọsọ ọsọ karịa KineMaster, ana m agbakwa ọsọ ọsọ. O nwekwara ike ịbụ ihe na-akpali mmasị: Ngwá ọrụ nchịkọta vidiyo kacha mma.
KineMaster - nchịkọta vidio maka gam akporo, nke enwere ike ibudata n'efu na ngwa ngwa ngwa Google Play. Enwere ụgwọ pro Pro ($ 3) ụgwọ. Mgbe ị na-eji nsụgharị free nke ngwa ahụ na ala aka nri nke vidio ahụ ga-apụta bụ akara mmiri nke usoro ihe omume ahụ. N'ụzọ dị mwute, onye nchịkọta akụkọ adịghị na Russian (ma ọtụtụ ndị, dị ka m maara, nke a bụ ihe dị oké njọ), ma ihe niile dị mfe.
Iji KineMaster Video Editor
Na KineMaster, ị nwere ike dezie vidiyo (na ndepụta nke atụmatụ dị oke) na gam akporo ekwentị na mbadamba (gam akporo version 4.1 - 4.4, nkwado maka Full HD video - ọbụghị na ngwaọrụ niile). Ana m eji Nexus 5 mgbe edere nyocha a.
Mgbe ị wụnye ma na-agba ngwa ahụ, ị ​​ga-ahụ akụ a kpọrọ "Malite ebe a" (malite ebe a) na ngosipụta nke bọtịnụ iji mepụta ọrụ ọhụrụ. Mgbe ị na-arụ ọrụ mbụ ahụ, a ga-esonye akara ọ bụla nke ntinye vidio na - egosi (nke na - emerụ ntakịrị).
Nchịkọta nchịkọta akụkọ vidiyo bụ ihe anọ: isi ihe anọ dị na-agbakwunye vidiyo na ihe oyiyi, bọtịnụ ndekọ (ị nwere ike idekọ ọdịyo, vidiyo, were foto), bọtịnụ ịgbakwunye egwu na vidiyo gị, n'ikpeazụ, mmetụta maka vidiyo.
N'okpuru usoro ihe omume ahụ, a na-egosipụta ihe niile n'ime usoro iheomume, nke vidiyo ikpeazụ ga-agbanye, mgbe ịhọrọ nke ọ bụla n'ime ha, enwere ngwaọrụ maka ịme ụfọdụ omume:
Tinye mmetụta na ederede gaa na vidio, nkwụsị, ịtọ ọsọ ọsọ ọsọ, ụda na vidiyo, wdg.
Gbanwee oge nke mgbanwe dị n'etiti obere vidiyo, ogologo oge nke mgbanwe, ịmepụta vidiyo.
Ọ bụrụ na ị pịa akara ngosi ahụ na akara ngosi akara, egwu egwu niile nke ọrụ gị ga-emeghe: ọ bụrụ na ịchọrọ, ị nwere ike ịhazigharị ọsọ ọsọ, gbakwunye egwu ọhụrụ, ma ọ bụ idebe olu olu site na iji igwe okwu nke ngwaọrụ ngwaọrụ gị.
Nakwa na nchịkọta akụkọ a na-enwe "Tọọlụ" nke nwere ike itinye ya na vidiyo ikpeazụ.
N'ozuzu, O yiri ka m agwala ihe niile banyere ọrụ: n'ezie, ihe niile dị mfe, ma dị irè, n'ihi ya, ọ dịghị ihe pụrụ iche ị gbakwunye: gbalịa.
Mgbe m mepụtara vidio m (n'ime minit ole na ole), enweghi m ike ịchọta ogologo oge iji zọpụta ihe merenụ. N'elu ihuenyo nke nchịkọta akụkọ, pịa "Back", wee pịa bọtịnụ "Share" (akara ngosi na aka ekpe), wee họrọ nhọrọ mbupụ - karịsịa, ntinye vidiyo - Full HD, 720p ma ọ bụ SD.
Mgbe mbupụ, ọ tụrụ m n'anya na ọsọ ọsọ - 18 video abụọ na 720p mkpebi, na mmetụta, ederede screensavers, anya maka 10 sekọnd - nke a dị na ekwentị. My Core i5 bụ nwayọọ. N'okpuru ebe a bụ ihe merenụ n'ihi ihe m nwetara na nchịkọta vidio a maka gam akporo, kọmputa ejighi eji vidiyo a eme ihe.
Ihe ikpeazụ ị ga - achọpụta: n'ihi ihe ụfọdụ, na ọkọlọtọ m (Player Classic Classic) a gosipụtara vidiyo ahụ n'ụzọ ziri ezi, dịka ọ bụrụ na ọ "agbajiri," na ndị ọzọ ọ bụ ihe nkịtị. O doro anya na ihe nwere codecs. A na-echekwa vidiyo na MP4.
Nbudata nchịkọta video nke KineMaster n'efu site na Google Play //play.google.com/store/apps/details?id=com.nexstreaming.app.kinemasterfree
https://termotools.com ig.termotools.com © Ngwa mkpanaka 2019